पत्रकारको भेष गरी युद्धमोर्चामा | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 03/07/2010 - 11:13
त्यतिखेर म विद्यार्थीको नेताजस्तै थिएँ । विद्यार्थी आन्दोलन संगठित गर्न र त्यसलाई चलाउनका निम्ति प्रशिक्षण/छलफल चलाएर मात्र हुँदैनथ्यो, सांस्कृतिक आदि मनोरञ्जनमूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो । सोचेँ, मनोरञ्जन पनि हुने र यसो 'फन्ड' पनि जम्मा हुने । विसं २००७ कात्तिक २५ गते विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गरेर सुवर्णशमशेर जबराको कोलकाताको क्यामक स्ट्रिटस्थित निवासमा देउसी खेल्न गयौँ । सुवर्णशमशेर मात्र होइन, थीरबम मल्ल पनि घरमा नभएको जानकारी पाइयो । सुवर्णशमशेरको परविारले थालमा सेलरोटी सजाई १ सय १ रुपियाँ राखेर हामीलाई बिदा गर्नुभयो ।
भोलिपल्ट हामी भवानीपुरस्थित एउटा नेपाली परविारकहाँ देउसी खेल्न गयौँ । सेलरोटी, चिया र अचार खाँदै रमाइलो गरिरहेका थियौँ, सडकमा अखबार बेच्नेले टेलिग्राफ, टेलिग्राफ भन्दै कराएको सुनेँ । बाहिर निस्केर यसो पत्रिका हेर्छु त हिन्दूस्तान स्ट्यान्डर्डको मुखपृष्ठमै छापिएको थियो, '...नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेना र राष्ट्रिय फौजबीच घमासान युद्ध । ...मुक्तिसेनाका प्रथम सेनानी सख्त घाइते !'
म अवाक भएँ । त्यसपछि सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ र म सरासर पटनाका लागि रवाना भयौँ । कात्तिक २७ गते जब म पटना पुगेँ, भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू सशस्त्र क्रान्तिमा भाग लिनका लागि ब्यांक रोडस्थित काजिनुकको घरमा भेला भएका रहेछन्, जहाँ बीपी कोइराला बस्नुहुन्थ्यो । त्यसमध्ये नगेन्द्रप्रसाद रजिाल, भरतमणि शर्मा, तुलसीलाल अमात्य, निर्मल लामा, विष्णुबहादुर मानन्धर, महेशमणि दीक्षित आदिको नाम मलाई सम्झना छ । त्यत्तिकैमा महेशमणिले कांग्रेसको व्यानरमा होइन, संयुक्त रूपमा क्रान्तिमा जान प्रस्ताव गरे । तर, कांग्रेसको अगुवाइमा क्रान्ति अगाडि बढेकाले त्यो सम्भव थिएन । केही समय विवाद भयो, त्यसपछि एउटा सानो समूह त्यहाँबाट बाहिरियो ।
बीपीका साह्रै नजिकका मित्र देवेन्द्रबाबुले त्यत्तिकैमा भन्नुभयो, "रामहरिजी ! उहाँ जनता दैनिकको सम्पादक हुनुहुन्छ । उहाँ आफ्नो पत्रिकामा 'नेपाल विशेष' प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ । त्यसका लागि तपाईंले सहयोग गरििदनुपर्यो ।" जनताका सम्पादक रामवृक्ष बेनीपुरी आफ्नो बेग्लै लेखन शैलीका कारण प्रसिद्ध थिए । उनका केही कथा र नाटक मैले पढेको थिएँ । भारतीय समाजवादी पार्टीका लिडर पनि थिए उनी । क्रान्तिकारी स्वभावका उनी हिन्दीका प्रसिद्ध साहित्यकारका रूपमा परििचत थिए । कुनै समय थियो, दशरथ चन्दले सेवा सिंहको छद्मनामबाट राणाविरोधी थुप्रै राजनीतिक लेखहरू जनतामा लेख्नुहुन्थ्यो ।
कात्तिक ३० गते हामी वीरगन्ज आइपुग्यौँ । त्यहाँ यति अस्तव्यस्त थियो कि बयान गरेरै साध्य छैन । हामीलाई रक्सौलमा राखिएको थियो । खाटमा कतै बाकस, कतै के राखिएको छ । कोठा पूरै अस्तव्यस्त छ । टेलिफोनको घन्टी बजिरहेको छ, कसैलाई वास्ता छैन । सबै आ-आफ्नो धुनमा मस्त छन् । रानो हराएको मौरी भन्छन् नि ! त्यस्तै छ । त्यसपछि हामी रेल्वे स्टेसननिरको गेस्टहाउसमा पुग्यौँ । तेजबहादुर अमात्य, गोपालप्रसाद भट्टराई आदि आइपुगे । त्यहाँ पहिले नै केही भारतीयका साथ विदेशी पत्रकारहरू पुगिसकेका थिए । भर्खरै परवानीपुरको मोर्चाबाट विश्रामका निम्ति त्यहाँ आइपुगेका अन्तरमि प्रशासक तेजबहादुरलाई सबैले घेरहिाले । र, परवानीपुरको युद्धस्थल हेर्न पत्रकारका लागि एउटा जिप उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरे । तेजबहादुरले भन्नुभयो, "रामहरिजी तपाईं पनि पत्रकार बनेरै जानुपर्ला । दार्जीलिङबाट प्रकाशित हुने हिमालय टाइम्सको संवाददाता भन्नुहोला ।"
पत्रकारको टोलीमा दिल्लीको पीटीआईका संवाददाता बिल्फ्रेड लजारस, कलकत्ताको स्टेट्सम्यानका संवाददाता मेहरचन्द र स्टाफ फोटोग्राफर वाकर, बनारसको आजका संवाददाता जगदीशचन्द्र अरोडा, लन्डन अब्जर्भरका एक जना ब्रिटिस संवाददाता, एक जना अमेरिकी पत्रकार र म थियौँ । हामीलाई लिएर जीप एनजीआरको रेल्वे लाइनको छेउछेउ धूलो उडाउँदै उत्तरतिर लाग्यो । हाम्रो जीप परवानीपुरको पुलनिर पुग्नासाथ मुक्ति सेनाका एक जवानले झाङबाट फुत्त निस्केर रिभल्भरको इसारामा जीपलाई रोके । ती जवान राम्रै धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल्दा रहेछन् । कुराकै सिलसिलामा थाहा भयो उनी त दोस्रो विश्वयुद्धमा इजिप्टसम्म पुगेर लडेका रहेछन् । उनको अवस्था देखेर म साह्रै भावविभोर भएँ ।
मुक्ति सेनाको त्यहाँको अवस्था साह्रै दर्दनाक थियो । पूरा कपडा लगाएको कोही छैन । कसैले कट्टु मात्र लगाएका छन् । कुनै पनि बेला त्यहाँ घमासान युद्ध हुन सक्ने अवस्था थियो । राष्ट्रिय फौज जितपुरको जंगलसम्म आइपुगेको थियो । मुक्तिसेनाका जवानहरूले हामीलाई त्यहाँबाट अगाडि बढ्न दिएनन् । पत्रकारहरू आपत्तिजनक प्रश्न पनि गरिरहेका थिए । मलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो । बिचराहरू पोल्टामा एउटा डल्लो भात र भुटेको मकै लिएर युद्ध गरिरहेका छन्, पत्रकार बिनामतलबका प्रश्न सोध्छन् । स्वाभाविक थियो, उनीहरू रसिाउनु पनि । सपनाजस्तो लाग्यो । यिनीहरू यसरी लडिरहेका छन्, हामीले त खै केही गर्न सकेका छैनौँ । पत्रकारको भेषमा गएकाले मैले पनि धेरै बोल्न मिल्ने अवस्था थिएन ।
साँझ झमक्क पर्दा त्यहाँबाट फर्केपछि हामी ठूलो आपतमा पर्यौँ । नेपाल-भारत सीमामा पर्ने सिर्सिया नदीमा भारतीय फौजले रोक्यो र खानतलासी लिन थाल्यो । हामी पत्रकार हौँ भनेर परचिय दिँदादिँदै पनि उनीहरूले मानेनन् । पत्रकारसँग के हुन्छ, क्यामरा हेर्ने भन्यौँ तर पनि उनीहरूले मानेनन् । चेक गर्दा त हामी बसेको सिटमुनि हाते बम, रिभल्भर आदि भेटियो । हामी त किंकर्तव्यविमूढ भयौँ । कति लापरबाही गरएिको रहेछ ! हामीले त कल्पना पनि गरेका थिएनौँ, यहाँ हतियार छन् भनेर । यस्तै हुन्छ, गैरसैनिकको हातमा सैनिक नेतृत्व पुगेपछि । हतियार त खोसे तर पत्रकार भएकाले हामीलाई भने केही गरेनन् ।
यस्तै अर्को घटना छ, क्याम्पभित्रको । ३५ लाख भारतीय रुपियाँ त पहिले नै भारतीय सेनाले कब्जा गरसिकेको थियो । हामी कोठामा बसिरहेका थियौँ । दुई ट्रक भारतीय फौज आयो । आएर बाकस खोल्न लगाउँछ, बाकसभरि चाँदीका मोहर छन् । दाउरा थुपारेर राखिएको छ, दाउरा हटाउँदा हतियारै हतियार छन् । भान्सामा हेर्यो, त्यही असरल्ल सकेट बम छन् । जता हेर्यो उतै अव्यवस्थित ढंगले हतियार छोडिएको छ । भद्रगोल छ । मियोबिनाको दाइँजस्तै लाग्यो ।
यसरी सुसंगठित र प्रशिक्षित सेना तथा गोलीगठ्ठाको अभाव र निश्चित योजना नबनाई अघि बढ्नाले १२ दिनसम्मको युद्धपश्चात् कब्जा गरिएको वीरगन्जबाट मुक्ति सेना पछि हट्यो र गुरल्िला युद्धको रणनीति अपनाई ठोरीको जंगलमा आफ्नो शिविर सार्यो । त्यसपछि मेजर पूर्णसिंह खवासको नेतृत्वमा त्रिवेणीको किनारसम्म कब्जा गर्न पुग्यो । त्यहीँबाट विराटनगर र काठमाडौँका लागि मोर्चा कसेको थियो ।
राजनीतिकर्मीका रूपमा यो सबै देख्न असम्भव थियो । तर, पत्रकारको भेषमा सबै सम्भव भयो ।
नेपाल साप्ताहिक ३८५
धेरै दिन भयो अब नेपाल टेक्न मन छ
‘राजेश’ - ३ः नासोको सुरक्षा